Izixhobo zeMephu ye-AutoCAD 3D 2009 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Iikhukhi zezixhobo ze-AutoCAD Imephu ye3D 2009
Iikhukhi zezixhobo ze-AutoCAD Imephu ye3D 2009
Ngo-Novemba isemina ye-AutoCAD yemephu i-3D 2009 iisemina ezinezisombululo zoPhando, Amanzi, ucoceko kunye neendawo zombane ziya kufundiswa kwiidolophu ezahlukeneyo eSpain.
Yintoni onokuyilindela kuphando:
Izixhobo zokwenza, ukubona kunye nokuhlalutya iimodeli zedigitalograph ziya kuhanjiswa, kunyeoyilo oluchanekileyo kunye nokuhlaziya iinkqubo xa zisebenza ngedatha eqokelelweyo kusetyenziswa itopali, uphando kunye nezixhobo zeGPS kunye nezixhobo. Ngolwazi lwezi zixhobo sinethemba lokuba banceda abaqulunqi, abaqulunqi, abaqulunqi kunye nabaqulunqi basebenzise ngcono ubuchwephesha, i-GPS kunye ne-LIDAR (Ukufunyanwa kokuKhanya kunye nokuLunga) kwimephu ye-AutoCAD 3D 2009. Izixhobo zokuphonononga zifuna ukubonelela ngale ndlela yokusebenza:
Ukuhambelana okungcono kwedatha yenqaku: Iifayile ze-ASCII, imithombo yedatha ye-FDO kunye namanqaku e-AutoCAD, ukwabela ii-asethi kunye nokwenza indawo ye-3D ngokuchaneka ngakumbi.
Ukudala umphezulu: ukusetyenziswa kweeseti ezinkulu zeedatha kunye namanqaku kunye neebanga ukwenza, ukubona nokubhenca umphezulu we-3D.
Imiyalelo engakumbi ye-COGO: ulungelelwaniso / utyekelo kunye nomgama / umgama / umgama umda uchaza amanqaku ngokuthe ngqo kulwabiwo lweeasethi kunye nokuzoba ulwazi lomda.
Ukuhambelana kweLandXML: Ukutshintshiselana ngokulula kobuso kunye nezinye iiphakheji zesoftware ngokungenisa / ukuthumela izinto zangaphandle zeTIN kwiLandXML kunye nokukhuphela umphezulu weGRID kwiGeoTIFF.
Amaxwebhu omsebenzisi: incwadana yomsebenzisi kunye nesalathiso se-API sikuvumela ukuba ufumane okuninzi kwiseti yesixhobo ngexesha elincinci.
Iziganeko ziya kwenzeka ezixekweni:
I-Barcelona, ​​iLlanera, iAlbacete, iAlberia, iMurcia, iMadrid, iSeville, iGeta fe, iValencia, i-Erandio.
Apha ungabona ulwazi epheleleyo, kunye imihla yemihlangano.
I-AutoCAD Imephu GPS